Critic » အလင်းခြုံတဲ့ သတင်း Zone-32	9
Posted by Thint Aye Yeik on Apr 9, 2015 in Critic, Environment, History, My Dear Diary, Myanma News, Myanmar Gazette, News |9comments
US က မြန်မာအစိုးရကို ချီးမွမ်း ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက် မြန်မာအစိုးရဟာ ပြောင်းလဲရေးတွေ ပိုမို လုပ်ဆောင်လာသလား ၊ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာအစိုးရဟာ ငါတို့ ဒီထက်ပိုပြီး ဘာမှ ထပ်လုပ်စရာ မလိုဖူးဆိုတဲ့အမြင်သာ ပေါ်ပေါက်စေသလား ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေးခွန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ။။။။။။။။။။။။။။
တောင်ပေါ်သား says: ယာဉ်တိမ်းမှောက် သတင်း ယာဉ်လိုင်းအမည်မှား ဖော်ပြမှုအတွက် Sky Net ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်နေသည့် ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီအား ရွှေစင်စကြ်ာယာဉ်လိုင်းက နစ်နာကြေး ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Alinn Z says: အဲ့…အယ်…
အဲဒါ..ရွှေစင်စကြ်ာ မဟုတ်ဘူးလား… အဲနေ့က အဲ့သတင်းကြားပြီး. စိတ်ထဲ ဖြုံသွားသေး..
ကျနော်လည်း ကရင်ပြည်နယ်ကို ရွှေစင်စကြ်ာနဲ့ သွားမှာလေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: နာမည်က မှားချင်စရာ ၊
ဒါပေမယ့် နှစ်သောင်း ၊ ရေးထားတာက ၁၀၈၀၀ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12181
Alinn Z says: ပျံတောင်း ပျံတောင်း…
မပေးလှင် ဂဲနဲ့လိုက်ထု… သတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုယူတဲ့ အဝေးပြေးကားများ အရေးယူခံရ
တောင်ပေါ်သား says: ပြန်တောင်းကာမှ ငါ့လက်မှတ်ကလေးဆုံးသွားပါဦးမယ်ကွယ်
ပိုပေးရတာကို ကာမိအောင် ဘီဘီ သောက်ဘူး ၊ တစ်နပ်လျှော့စားမယ် Was this answer helpful?LikeDislike 12181
Alinn Z says: အင်းးးးးး
အိုဘယ့် ဗမာပြည်… အဲ… ဒါတွေ ဖြစ်နေတာ…စနစ်ကြောင့်လား..အကျင့်ကြောင့်လား.. Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ကျုပ်​တို့ဆီက​တော့ ပိုမ​တောင်းဘူးဗျ ။ ​ရန်​ကုန်​ကို ၆၈၀၀ က ၆၈၀၀ ပဲ ။ ဟိုတစ်​ရက်​က အလက်​ဇင်းဒါး စာအုပ်​ပို့​ပေးလို့သွားယူတုန်းက ​တွေ့ခဲ့တာ ။ အဲ့ ကားလက်​မှတ်​​တော့ တစ်​ရက်​ကြိုယူရတယ်​ ။ ဒီ​နေ့သွား ဒီ​နေ့ကား​တော့မရဘူး ။ Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: တမဒဂျီး သမိုင်းက ပြန်ထွက်ဖို့ ဖာဝန် မပြောသေးဘူးလား??
Alinn Z says: ဒီသမဒဂျီး ကောင်းလျှာပါဒယ်ဂျာ…
သမိုင်း မပြောနဲ့ အုတ်ကျင်းနားက လူနေရပ်ကွက်ထဲတောင် ရောက်ဖူးပါ့မလားမသိ… အဘတို့ ရေ..ချစ်လို့ စတာနော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.